ပိတ်ဆို့မှု လုံးဝရုပ်သိမ်းပေးဖို့ သမ္မတ အကြံပေးက တိုက်တွန်း
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုအားလုံး လုံးဝ ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ နိုင်ငံရေး အကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင်က စင်္ကာပူနိုင်ငံက ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာ ဒီကနေ့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဦးကိုကိုလှိုင် (ဝဲဘက်) ဖြစ်ပါသည်။
ကျန်နေသေးတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ၀င်ရောက်လာဖို့ အတွက် အကန့် အသတ်တွေ ဖြစ်နေသလို၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက် စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုသေးတယ်ဆိုတဲ့ သဘောထား ရှိနေကြတယ်။
ဒါကြောင့် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို ဆိုင်းငံ့ထားရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘဲ လုံးဝရုပ်သိမ်းလိုက်မှသာ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေရှည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေလုပ်ဖို့ ဆွဲဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဦးကိုကိုလှိုင်က ပြောသွားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ ခရီးသွားလာခွင့်နဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုတွေကို ရုပ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်း သြစတြေလျ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Bob Carr က ကြေညာလိုက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ခုလို ပြောသွားတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့ သြစတြေလျ အစိုးရရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကူအညီကို ၂ ဆ တိုးမြှင့်သွားမယ်လို့ သြစတြေလျ ဝန်ကြီးက နေပြည်တော် ခရီးစဉ်အပြီး ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တချို့ကို အရေးယူပိတ်ဆို့ဖို့ EU နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများ ထောက်ခံ
ပိတ်ဆို့အရေးယူမယ့် မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်စာရင်း ထွက်လာမည်
မြန်မာ စစ်တပ်ကို အရေးယူဖို့ ကုလမှာ ကန်ပြောကြား
စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ပိတ်ဆုိ့ရေး ကန်လွှတ်တော်ကို PHR တိုက်တွန်း
မြန်မာစစ်တပ်ကို ပစ်မှတ်ထားအရေးယူဖို့ဥပဒေကြမ်း ကန်လွှတ်တော်ကော်မတီအတည်ပြု
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို အရေးယူဖို့ ဂျူးအဖွဲ့တွေ တိုက်တွန်း
စစ်တပ်အပေါ် ပြင်းထန်တဲ့ ဖိအားတွေချမှတ်ဖို့ ယန်ဟီးလီ တိုက်တွန်း
ကန်အစိုးရ ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်အရေးယူရာမှာ မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦး ပါဝင်
ခင်ဗျား၇ဲ. အစိုး၇ကို ပြန်မေးလိုက်ပါဦး ဂတ်စ်ေ၇ာင်းထားတဲ. ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်မှာလဲလို.
Jun 09, 2012 04:14 AM
you guide are stupid because of you don'T HAVE A ELECTRICITY NOT ENOUGH.WHO WANT TO INVEST IN YOUR COUNTRY.YOU GUIDE WANT A MONEY ONLY,LOOK LIKE A ROBBER.YOU GUIDE ARE VERY STUPID MILLTARY GOVERMENT.
Jun 08, 2012 10:00 PM
They want more than they give. Nothing changes in Burma.
Jun 08, 2012 09:52 PM
Before you request to move the sanction free all political prisoners in Burma.
Jun 08, 2012 08:18 PM